Wararka – Geelle Magazine
Wasiir dawladda Soomaaliya ka tirsan oo lagu weeraray magaalada Galkacyo
admin Posted On April 21, 2022
Wasiirka arimaha dibada Soomaaliya, Cabdisaciid Muse, ayaa ka badbaaday weerar ka dhacay beer ku taal magaalada Galkacyo kaas oo hal qof ku geeriyooday galabnimadii maanta magaalada Galkacyo. Waxaa weerarka ku dhaawacmay ilaa afar qof oo kale. Wasiirka ayaa la afuray […]
Madaxweyne ku xigeenka Puntland oo afgembi sameeyey
Madaxweyna ku xigeenka Puntland, Axmed Karaash, oo ku dhawaaqay inuu xilka si ku meel gaar ah ugala wareegay madaxweynaha Puntland kadib markii uu Siciid Cabdullahi Deni oo ah madaxweynaha Puntland uu bilaabay ololaha tartanka madaxtinimada dawladda federalka Soomaaliya oo uu […]
Qarax khasaare dhimasho iyo dhaawac leh dhaliyay ayaa goor dhaweyd waxaa uu ka dhacay Magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, waxaana la sheegay in qaraxaasi lagu bartilmaameed saday Ciidanka dowladda. Wararku waxaa ay sheegayaan in qaraxu uu ka dhacay halka loo […]
Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida oo xukun dil ah ku riday Askari lagu helay fal kufsi ah.
Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ayaa manta xukun dil ah ku xukuntey Maxamed Xuseen Cilmi oo kufsi uu u gaystay Dhibane Farxiyo Cabdi Shakuur Bootaan oo Afar jir ah, 14-kii May Sanadkan, Kufsigaasi oo ka dhacay degmada Wadajir. Maxamed Xuseen Cilmi […]
Wararka / Warbixino
Safiirka Soomaaliya ee Suudaan oo la kulmay dhiggiisa Norway.
Danjiraha Soomaaliya u fadhiya Dalka Suudaan mudane Maxamed Sheekh Isxaaq ayaa xafiiskiisa magaalada Khaartuum kula kulmay safiirka cusub ee dalka Norway u fadhiya Suudaan Therese Loken Gheil. Intii uu socday kulankoodi waxay danjireyaasha labada dhinac ay ka wada hadleen sidii […]
Taliye kuxigeenka Booliska Puntland oo ka warbixiyay Ciidamo lagu wareejiyay saldhigyadda Gobolada Mudug iyo Nugaal.
Taliye kuxigeenka Ciidanka Booliska Dowladda Puntland Gen Caydiid Axmed Nuur ayaa ka warbixiyay ciidan lagu wareejiyay saldhigyadda magaalooyinka Garowe ,Gaalkacyo,Buurtinle,Jariiban,Dongoroyo iyo Deegaano kale oo ka tirsan Gobolladda Mudug iyo Nugaal. Gen Caydiid Axmed Nuur ayaa sheegay in Ciidamada manta lagu […]
Akhriso: Warark ugu danbeeyay Dagaalka udhaxeeya Azerbaijan iyo Armenia oo galay Maalinki Sadexaad.
Ciidamada Azerbaijan iyo Armenia ayaa sheegtay in midba mid kale uu khasaare xooggan gaarsiiyey, ayada oo maalinkii saddexaad uu galay dagaalka u dhaxeeya ee ka socda gobolka gooni u goosadka ah ee Nagorny Karabakh. Baaqyo ka yimid hogaamiyeyaasha caalamka oo […]
Shir looga hadlayo Tacadiyada loo gaysto Haweenka oo Manta Muqdisho ka furmay.
ahmedzaki Posted On September 28, 2020
Guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa caasimada Mudane Cumar Maxamuud Maxamed (Cumar filish) ayaa gudoomiyay shirka totobaadlaha ah ee degmooyinka gobalka Banaadir oo looga hadlay todobaadkaan arrimaha tacaddiyada loo gaysto haweenka Soomaaliyeed waxaa uuna ka dhacay xarunta ururka dhalinyarada gobolka Banaadir. […]
Muxu salka ku haya Heshiiska wada gareen Maraykanka iyo Somalia.
Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto iyo sii hayaha wasiiirka maaliyada Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, ayaa kala saxiixday heshiis labo geesood kaas oo lagu dhimayo dibna loogu qaabeynayo deyn Soomaaliya ay ku leeyihiin sadax hey’adood oo Dowladda mareykanka ah,waxaana […]